'Ixesha leCreepshow' 2 Imveliso iQalile ngokusemthethweni!
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	'Ixesha leCreepshow' 2 Imveliso iQalile ngokusemthethweni!
by Waylon Jordan Septemba 10, 2020
by Waylon Jordan Septemba 10, 2020 1,000 imbono
Imveliso igqibile kwisizini yesibini ye I-Creepshow, Uthotho lwe-Shudder's anthology esekwe kwifilimu ukusuka kwiminyaka ye-1980. Imveliso yahlehliswa ebutsheni balo nyaka xa uninzi lwelizwe lwaluphantsi kwengxaki malunga neCovid-19.
Ixesha leziqendu ezithandathu limiselwe ukuba liboniswe okokuqala ngo-2021.
"Andikaze ndonwabe kakhulu emva kwekhamera njenganamhlanje," utshilo umboniso UGreg Nicotero yatsho kwingxelo. “Emva kokuphosa umhla wokudubula ngoMatshi ngeeyure nje ezingaphaya kwama-48, ixesha lesibini le I-Creepshow ibetha emhlabeni ibaleka njengoko iikhamera ziqala ukuqengqeleka. I-cast kunye ne-crew banenqanaba lokonwaba kunye nehlombe endikhe ndalibona ngaphambili kwaye liyakhuthaza. Uninzi lwethu kwicandelo lezolonwabo belilindele usuku apho singaqala khona ukwenza konke okusemandleni ethu-ukuba sonwabe kunye sisenza imihlaba emitsha, ubumnandi obutsha kunye nemincili emitsha. ”
"Isizini yokuqala yaba sisilo esikhulu kuthi, ukuseta iirekhodi zokubukela kuyo yonke ibhodi ngelixa yayiyeyona nto iphambili ehlaziyiweyo ka-2019," Umphathi Jikelele kaShudder, uCraig Engler wongeze. "Kwixesha lesibini, uGreg Nicotero kunye neqela lakhe bazigqithile ngamabali amakhulu kunye nesibindi, uyilo lwesidalwa esitsha esimangalisayo, kunye neendlela eziqinisekileyo zokuphila ngokuhambelana nomxholo wethegi, 'Olona lonwabo lukhulu uza kuba noloyiko."
Olu luhlu lusekwe kwifilimu yakudala ka-1982 kaGeorge A. Romero.
Ukongeza kwisibhengezo semveliso, sikwafumene igama kumacandelo amane azakuboniswa kwixesha lesibini I-Creepshow.
Phezulu kuqala ngu "Shapeshifters Anonymous" Icandelo lokuQala elinye kunye neibini ezibalaseleyo uAnna Camp (Igazi lokwenyanikunye noAdam Pally (Project Mindy). Amacandelo abhalwe nguNicotero, ngokusekwe kwibali lika-JA Konrath (Call wokugqibelamalunga nendoda eqalekisiweyo ekhangela iqela lenkxaso yewolf.
Emva koko, uKeith David (Into, UAshley Laurence (Hellraiser), Kunye noJosh McDermitt (The Walking Deadiya kuvela kwicandelo elibhalwe nguFrank Dietz elibizwa ngokuba yi "Pesticide" malunga nomtshabalalisi owenza "ingxoxo yomlilo."
Kwaye okokugqibela, "Model Kid" ibhalwe nguJohn Esposito kwaye ichaphazela inkwenkwana ejika iye kwiikiti zokwakha izilo ukubaleka ubomi bayo obungonwabisiyo.
Ixesha lokuqala laphazamisa iirekhodi kwibhodi ye-Shudder, kwaye ngokuqinisekileyo siza kulilungiselela ixesha lesibini I-Creepshow xa ifika kunyaka olandelayo!
Ngaba wonwabile kwixesha lesibini? Sazise ukuba ucinga ntoni ngezimvo!